Malware na ụzọ iji zere ya & na; Ngwakọta Semalt Ga-egosi Gị Ole aghụghọ
Julia Vashneva, Semalt Onye na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị ahịa, ga - emeghe anya gị ụfọdụ aghụghọ dị mkpa iji rụọ ọrụ mgbe malware na - awakpo gị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile na-agbagha nje virus na malware na akụkụ ụfọdụ nke ndụ anyị. M ziri ezi? Ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ inwe nje; kama nke ahụ, ị ​​ga-enwe nchegbu maka nchedo weebụ gị na nchekwa dị n'ihe ize ndụ. Mgbe kọmputa gị malitere ịkụda ala, nke ahụ bụ oge ị kwesịrị izere malware ma buru nnukwu ihe.
Jiri nchebe echekwara na ihe niile
Ihe mbụ ị ga - eme bụ iji nchebe echekwara na nke ọ bụla - free server vps windows. Nke a ga-eme ka usoro gị ghara ịdaba na mwakpo weebụ, ntanetị n'ịntanetị, na-agbanwe nje na ụgbọala-site nbudata. Maka oke nchedo, ịkwesịrị ime ka ihe iyi egwu gị na-echedo software ma gụọ ngwaọrụ ahụ ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu. Ị nwekwara ike ịnwale Intrusion Prevention Systems, Firewall, Insight, SONAR, na Antivirus maka nchekwa gị n'ịntanetị. Symantec Security Response na-ekwu na anyị kwesịrị ịdebe usoro ngwanrọ na usoro ọrụ anyị kwa ụbọchị.
Belata ala agha ahụ
Mbelata oke agha ahụ dị oke mkpa. I kwesịrị iwepu ngwa ndị ị na-ejighị. Mee ka m kwuo ebe a na ihe ndị dị oke ize ndụ ma ọ bụ ndị nwere nchekwube nwere ike ime ka ihe kacha njọ na usoro gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nyochaa ngwa gị otu ugboro n'ụbọchị ma nọrọ na ntinye ịwụnye ngwanrọ amaghị na achọghị.
Meziwanye ọnọdụ Symantec Endpoint Protect settings
Imeziwanye ọnọdụ ntọala nchebe Symantec dị mkpa..Ọbụna ntọala ole na ole nwere ike iweta mgbanwe na nchedo weebụ gị. Ị ga-edebe ntọala ahụ maka ihe ndị ị chọrọ ma hụ na nzuzo gị ka ndị na - agba ọsọ ghara ịghọgbu gị.
Jide ihe ntanetị nchọgharị na-emelite
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-awakpo ahụ na-enyocha ihe nchọgharị gị wee gbalịa ịbaa usoro gị. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji dobe ihe nchọgharị gị na plugins ruo n'oge. Ikwesighi iji Internet Explorer, Acrobat, Flash, na Abode Photoshop na-enweghị nyochaa kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. Ọtụtụ nje na malware tinye usoro gị site na Internet Explorer. Ya mere, ọ ka mma ịhapụ ihe nchọgharị a wee gbalịa Google Chrome ma ọ bụ ihe nchọgharị ọzọ ị họọrọ.
Gbochie P2P iji
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa ndị na-agba ọsọ na-eji kesaa malware bụ site na netwọk P2P. Ịkwesịrị igbochi P2P iji mee ihe. Maka nke a, ịnwere ike ịmepụta na ịme ka iwu ndị P2P ghara ịdị na-eji dịka iji kọmputa gị eme ihe ka ọ ghara inwe ike ịnweta ngwaọrụ gị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike hụ na echekwara kọmputa gị na malware na nje ndị ahụ.
Ị nwere ike ịkwụsị mbata nke nje na malware site na ntụgharị nke AutoRun. Mgbe ị na-ebudata ihe, ị kwesịrị ị na-agbanyụ ya ka ọ ghara ịbanye na kọmputa gị.
Gbaa mbọ hụ na a na-etinye patches os nile
Ikpeazụ ma ọ bụghị nke kachasị nta ka ị ga-ahụ na a ga-etinye akwụkwọ ọ bụla os. Ndị dị ka Apple, Microsoft na Google wepụtara ọrụ nkwakọba, nche nche na hotfixes maka ndị ahịa ụwa kwa ọnwa. Ngwaahịa ha na-enyere anyị aka idozi ntụpọ na usoro ọrụ anyị. Ị nwere ike inweta ihe ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị ahụ ma wụnye na kọmpụta gị maka kachasị nchekwa na nchedo weebụ. Ma ị na-eji Mac os X, Windows ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọzọ, ị ga-emelite ihe nchọgharị na mmemme gị ugboro ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ọnwa.